Accueil > Gazetin'ny nosy > CFM : Tsy maniry korontana intsony ny Malagasy
CFM : Tsy maniry korontana intsony ny Malagasy
Nanao atrikasa mahakasika ny hisorohana ny krizy sy ny korontana ny Komitin’ny fampihavanana Malagasy (CFM) omaly alakamisy faha 06 desambra 2018 tetsy amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Panorama tetsy Andrainarivo. Araka ny voalazan’ingahy Maka Alphonse izay filohan’ity andrim-panjakana ity tamin’ny mpanao gazety dia ho fanohizana ny fanatanterahana ny satan’ny fitoniana izay efa nampanaovina sonia ireo kandidà 36 izay nandray anjara tamin’ity fifidianana izay ho filoham-pirenena ity, dia amin’ny maha raiamandreny ny CFM sy ny noho ny andraikitra izay iandraiketany dia manao izao atrikasa izao izy ireo. Marihina fa nisy tsy nanao sonia iny sata iny ireo kandidà ireo, nefa tsy maintsy manao izay hampisy ny fitoniana ity andrim-panjakana ity.
Voalaza fa ny mpikambana CFM eran’i Madagasikara izay nanao fanadihadiana sy nitafa tamin’ny vahoaka tao anatin’ny fiandrasana ny valim-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany sy hidirana amin’ny fihodinana faharoa izao dia nahatsapa fa tsy maniry ny hisian’ny korontana sy ny krizy intsony ny ankamaroan’ny Malagasy. Koa nampiantso ny kandidà roa mpifaninana ny CFM ireto mba hitandro hatrany ny lalàna sy ny fitsipika mifehy ny fifidianana ary ny soatoavina repoblikanina sy Malagasy koa manainga azy ireo mba tsy hanao zavatra hampisy izany korontana sy krizy izany intsony. Marihina fa ny solotenan’izy ireo no tonga namonjy ity fivoriana ity.
Niara-nivory tamin’ny CFM koa ny fikambanana sy andrim-panjakana izay mpiara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara ka isan’izany ny tao amin’ny Bianco na ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly, ny Samifin na ny sampan-draharaha miady amin’ny famotsiam-bola sy ny asa fampihorohoroana sy ny fikambanana maro amin’ny fiaraha-monim-pirenena. Mazava ho azy fa tsy afa-miala amin’izany ny CENI na ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana izay tompon’antoka amin’ny fanatanterahana ny fifidianana.
Nanambara ny filohan’ny Ceni ingahy Maka Alphonse fa isan’ny hodinihina amin’ity atrikasa ity koa ny mahakasika ireo lafiny teknika izay nampisy ahiahy ny kandidà tamin’ny fihodinana voalohany iny.
Manainga ny olom-pirenena rehetra ny CFM mba ho tony eo anatrehan’izao fifidianana izao.